Nkọwa:Ejiri ụgbọ ala ụgbọ ala maka Bus,Kwụsị mkpuchi ugbọ ụgbọ ala,Ejiri ikpuchi ụgbọ ala
Home > Ngwaahịa > Ekpuchi Uwe Nkwado Silicone > Silikel na-agbagharị ụgbọ elu ụgbọ ala maka ụgbọ ala
Ihe Nlereanya.: SWC2301
A na-eji ígwè silicone edozi silik na-arụ ọrụ ụgbọ ala maka ụgbọ ala . Ụlọ ọrụ anyị na-eji silik kachasị mma iji mepụta mkpuchi ụkwụ uhie silicone . B anyị mkpuchi ụkwụ enwere ike iji ya mee ihe maka ọtụtụ ụgbọala. S hrink ụgbọ ala n'iru wheel cover na-mmasị site ọtụtụ ahịa, n'ihi na ọ bụ kpochapụwo aghụghọ. Ihe mkpuchi uhie uhie uhie na- eme ka ụgbọ ala gị mara mma, ka ị hụ ya n'anya nke ukwuu. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụ mkpuchi wheel , ị nwere ike ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị.
Ejiri ụgbọ ala ụgbọ ala maka Bus Kwụsị mkpuchi ugbọ ụgbọ ala Ejiri ikpuchi ụgbọ ala Igwe ụgbọ ala ụgbọala Toyota Ụgbọala ụgbọala na-echekwa mkpuchi Egwuregwu ụgbọala ịnya ụgbọ ala Ụgbọala ụgbọala na-ekpuchi Online Mkpọgharị ụgbọala ụgbọala Ford